February 22, 2020 - Hargeele - Wararka Somali State
Cayaaraha February 22, 2020
(Spain) 23 Feb 2020. Real Madrid ayaa guuldarro xanuun badan kala soo kulantay kooxda Levante oo ay ku booqatay garoonka Ciutat de Valencia, kaddib markii loogu awood sheegtay 1-0, kulan qeyb ka ahaa horyaalka La Liga. Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala maray bar-bardhac 0-0 ah. Qeybta labaad marka dib leysugu soo laabtay labada kooxood […]Sii akhriso
(Manchester) 22 Feb 2020. Da’ayarka kooxda Manchester City ee Phil Foden ayaa ka jawaab celiyay warka xanta ah ee soo baxaya kaas oo ku aadan in kooxdiisa uu amaah kaga tagayo kaddib markii uu waayay fursado badan oo uu kaga soo muuqan lahaa naadiga macallin Pep Guardiola . 19-jirkan ayaa kaliya 2 kullan xagaagan kooxdiisa ugu […]Sii akhriso
(England) 22 Feb 2020. Kooxda Manchester City ayaa guul dirqi ah ka soo heshay kooxda Leicester City oo ay ku booqatay garoonka King Power, kaddib markii ay kaga soo adkaatay 0-1 kulan qeyb ka ahaa horyaalka Premier League Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala maray bar-bardhac 0-0 ah. Qeybta labaad marka dib leysugu soo laabtay […]Sii akhriso
(Spain) 22 Feb 2020. Kooxda kubadda cagta Levante ayaa naadiga Real Madrid ku soo dhoweynaysa garoonkeeda Ciutat de Valencia kulan ka tirsan horyaalka La Liga. Waxaa la shaaciyey haatan safafka rasmiga ah oo ay garoonka ku soo geli doonaan ee kooxaha Levante iyo Real Madrid. Haddaba halkaan hoose ka eeg safafka labada kooxood oo dhammaystiran:- […]Sii akhriso
(SPAL) 22 Feb 2020. Juventus ayaa guul dirqi ah ka soo heshay kooxda SPAL oo ay ku booqatay garoonka Stadio Paolo Mazza, kaddib markii ay kaga soo adkaatay 1-2, kulan qeyb ka ahaa horyaalka Serie A ee dalka Talyaaniga. Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala maray 0-1 ay ku hoggaamineysay kooxda martida aheyd ee Juventus. […]Sii akhriso
(Manchester) 22 Feb 2020.Tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester City ee Pep Guardiola ayaa ka hadlay wararka Raheem Sterling la xiriirinaya inuu ku biirayo naadiga Real Madrid. Pep Guardiola ayaa si cad u qirtay in xiddig kasta ay xiiseeneyso Real Madrid ay dhibaato weyn ku tahay kooxda uu ka tirsan yahay, isagoo sheegay inay ka walaacsan […]Sii akhriso
(Barcelona) 22 Feb 2020. Barcelona ayaa garoonkeeda Camp Nou guul kaga gaartay kooxda Eibar, kaddib markii ay kaga adkaatay 5-0, ciyaar qeyb ka aheyd kulamada horyaalka La Liga ee dalka Spain. Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 3-0 ay ku hoggaamineysay kooxda Barcelona. Daqiiqadii 14-aad kooxda Barcelona ayaa hoggaanka u qabatay ciyaarta waxaana 1-0 […]Sii akhriso
(England) 22 Feb 2020. Kooxda kubadda cagta Leicester City ayaa naadiga Man City ku soo dhoweynaysa garoonkeeda King Power kulan ka tirsan horyaalka Premier League. Waxaa la shaaciyey haatan safafka rasmiga ah oo ay garoonka ku soo geli doonaan ee kooxaha Leicester City iyo Man City. Haddaba halkaan hoose ka eeg safafka labada kooxood oo […]Sii akhriso
Ethiopia News February 22, 2020
Ethiopia plans to release interim jet crash report as probe continues ReutersSii akhriso
(London) 22 Feb 2020. Chelsea ayaa guul ay u qalantay kaga gaartay kooxda Tottenham Hotspur garoonka Stamford Bridge, kaddib markii ay kaga adkaatay 2-1, kulan qeyb ka ahaa horyaalka Premier League. Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala maray 1-0 ay ku hoggaamineysay kooxda martida loo ahaa ee Chelsea. Daqiiqadii 15-aad Chelsea ayaa hoggaanka u qabatay […]Sii akhriso